“ ကလေးတစ်ယောက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးပေးရတာနဲ့တူတယ်” - ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအတွက်အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ် (NZ TV) - Your Brain On Porn
18 မိနစ်ဗီဒီယိုအား Watch
"ဒါဟာကလေးတစ်ဦးမှတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးပေးခြင်းနှင့်တူ၏။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ "
26 နှစ်အရွယ်ဂျိမ်းစ်က Wong ဘို့, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့အန္တရာယ်ကင်းစိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်စတင် - နောက်ဆုံးမှာတစ်ဦးအဖျက်စွဲမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။
သူက porn Kiwi လူငယ်အပေါ်ရှိခြင်းသောသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်, TVNZ ရဲ့တနင်္ဂနွေအစီအစဉ်အတွက်နဲ့သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်း shared ။
မစ္စတာဝေါင်ကိုးနှစ်အရွယ်တွင် porn မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ မိမိအဆယ်ကျော်သက်အတွက်, မိမိအသုံးပြုမှု compulsive နှင့်အလွန်အကျွံဖြစ်လာခဲ့သည်။
"ကျနော်တဦးတည်းထိုင် 40 ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုနိုင်," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒါဟာပင်ပျြောမှေ့စမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်တာရှည်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တို့အပေါ်မှာဆွဲထားစောင့်ရှောက်စေတဲ့ထောင်ချောက်ပါပဲ။ "
မစ္စတာဝေါင်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အပျက်သဘောစိတ်ခံစားမှုမှလွတ်မြောက်ရန် porn ကိုသုံးပေမယ့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သူ့စိတ်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ ပို. ပင်သေဆုံးသူကိုယူ။
သူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်သောကွောငျ့မိမိအစွဲ၏လျှို့ဝှက်သဘာဝတရား၏တစ်ဦး "အရှကျကှဲနက်ရှိုင်းသောအဓိပ္ပာယ်" ခံစားရတယ်။
"ငါသည် porn ကိုယ်တိုင်ကနှင့်အတူဤ Insidious ကြားဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲသောကြောင့်ငါအမှန်တကယ်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်မဟုတ်နိုင်" ဟုသူကတနင်္ဂနွေကိုပြောသည်။
မစ္စတာဝေါင်တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပင်စွဲလမ်း - - အွန်လိုင်း porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကနျြးမာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအလွန်လှုံ့ဆော်အကြောင်းကို ပို. ပို. စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။
Los Angeles မြို့-based လိင်ကုထုံးဒေါက်တာရောဘတ် Weiss မဟုတ်ပေမယ့်တိုင်း porn အသုံးပြုသူအချို့အလိုတော်စွဲဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုတနင်္ဂနွေကိုပြောသည်။
"သင်တစ်ဦးအချည်းစည်းလူတစ်တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးလျှင်သင်, 15 နှစ်ရှိပြီဆိုရင်, သင်ထပ်ခါထပ်ခါ, ritualistic ထူးထူးဆန်းဆန်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုကြည့်ခြင်းနှင့်သူတို့ကို masturbating နေ - ကသင့်ရဲ့လိင်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်ရဲ့ကန့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် "ဟုဒေါက်တာ Weiss ကဆိုသည်။
ဒီနေ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတာဂရပ်ဖစ်များနှင့်အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးဇီလန်ရဲ့အကြီးအကဲဆင်ဆာ, ဒါဝိဒ်သည် Shanks, ကလူငယ်များပေးခြင်းကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတာဖြစ်ပါတယ်အစစ်အမှန်လိင်ကပါဝငျသောအရာကိုအကြောင်းကိုအမြင်များ warped - ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏အသုံးပြုမှုကိုမဆိုပုံဥပမာမရှိဘဲ။
"အင်တာနက်အပေါ် Porn မေတ္တာတော်ကိုအောင်အကြောင်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး" ဟုမစ္စတာ Shanks ကဆိုသည်။ "အဲဒီမှာဖွင့်စော်ကားသော, အရှက်လုပ်ရပ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောဆိုက်များကိုဖွင့်, ဒါမှမဟုတ်ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုမြှင့်တင်ရန်။ "
အဆိုပါဦးစီးချုပ်ဆင်ဆာရဲ့ရုံးမကြာသေးမီကသူတို့ porn, သူတို့အပေါ်ရှိခြင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု. မည်သို့နားလည်ရန်, 2,000 Kiwi ဆယ်ကျော်သက်များ၏အဓိကစစ်တမ်းပြန်တမ်း။
ဒီဇင်ဘာလ၌ဖြန့်ချိခံရဖို့ - - အစိုးရကြောင်းစစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုကိုသုံးပါလိမ့်မယ် porn စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိကြည့်ဖို့။
ကလေးများများအတွက်ဝန်ကြီး Tracey မာတင်သူမက porn ဆယ်ကျော်သက် '' အစစ်အမှန်ဘဝအပြုအမူလွှမ်းမိုးနေသည်မည်သို့တာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းခဲ့တာကိုတနင်္ဂနွေကိုပြောသည်။
"ကျနော်တို့ကပိုပြီးအမျိုးသမီးငယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြမ်းတမ်းလိင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများမှာပေါ်လာရှိခြင်းနေ - တူဆွဲဖြတ်ကွိတျ, အခြေအနေများ," မစ္စမာတင်ကပြောပါတယ်။
"လိင်ဆက်ဆံရာအရပ်ကိုကြာနေချိန်မှာမွန်းကျပ်ကြောင်း [porn] ပုံရိပ်ထဲမှာအကြိမ်အရေအတွက် - နှင့်သောငါတို့အမျိုးသမီးငယ်မှဖြစ်ပျက်ပါတယ်။ "
အဆိုပါဝန်ကြီးသူတို့ကျန်းမာ, လုံခြုံလိင်ကပါဝငျသောအရာကိုတစ်ဦးနားလည်မှုတီထွင်ခဲ့ကြမတိုင်မီ porn ထိတွေ့ခံရခြင်းမှလူငယ်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်သည်။
"တချို့လူတွေကငါ့ကိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအချို့ကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေအတိုင်းဤမြင်ရပါလိမ့်မည်" မစ္စမာတင်ကပြောပါတယ်။ "ဒါပေမယ့်ကင်မရာနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်လည်းအများအပြားလူငယ်များကဒီမှာရှယ်ယာမှာရှိပါတယ်။ "
လိင်ကုထုံး၏အကူအညီနှင့်အတူ, ဂျိမ်း Wong ကမိမိအစွဲမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
"ငါ, ငါ့ဘဝတစျခုလုံးလုပ်နေခဲ့တာကြောင့်တစ်ခုခု undo ဖို့ကြိုးစားနေတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါလုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီအခက်ခဲဆုံးအရာပါပဲ" ဟုသူကတနင်္ဂနွေကိုပြောသည်။ "ဒါပေမယ့်တစ်လမ်းထွက်ရှိပါတယ်။ "
Lifeline - 0800 543 354, အခမဲ့စာသား 4357
Youthline - 0800 376 633, အခမဲ့စာသား 234
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုအရေးပေါ်အကူအညီလိုင်း - 0508 828 865
စိတ်ကျရောဂါ Helpline - 0800 111 757 အခမဲ့စာသား 4202
အဆိုပါ Lowdown - အခမဲ့စာသား 5626
မုဒိမ်းမှုအကျပ်အတည်း - 0800 883 300
porn နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏လေးတွေနှင့်အတူပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့လိုသောမိဘများအဘို့, ခရီးစဉ်ကို အဆိုပါအလင်းစီမံကိန်း ဒါမှမဟုတ် အမျိုးအစားခွဲခြားရေးရုံး.
ယခုအပတ်တလျှောက်လုံး TVNZ ရဲ့သတင်းနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်များ porn ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်သတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးကိုလိုက်နာပါ ဒီမှာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြcoveringနာကိုအဘယ်ကြောင့်ဖော်ပြနေရကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ။မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက - ဘာကြောင့် porn အကြောင်းပြောဆိုရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်."
Jehan Casinader ခြင်းဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး